शब्दकोश: संक्षिप्‍त नेपाली शुद्धाशुद्धि ज्ञान
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, February 25, 2009
Basanta Gautam February 25, 2009
साह्रै समसामयिक र गहकिलो टाँसो राख्नुभयो धाइबाजी, धन्यबाद! चारैतिरबाट नेपाली भाषाको हुर्मत लिने काम भईरहेको छ। शुद्ध नेपाली नजानेपनि अथवा नेपालीनै नजानेपनि हुने धारणालाई बल पु-याइरहेको छ हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पनि। यो खडेरीको अवश्थामा हामी सबै मिलेर चिन्ता र चासोका थोपा-थोपा संगालेर, नेपाली भाषाको रसलाई जोगाउन र यसलाई अझ रसिलो बनाउन लाग्नुपरेको छ।
तपाईँले अन्त्यमा साभार गर्नुभएको कवितालाई केहि प्रति छापेरै राखें मैले त। कम्प्यूटरको अगाडि पर्नेगरी टाँस्नेछु र ब्लगमा वा अन्त कतै लेख्दा त्यसको निर्देशनलाई सधैं शिरोपर गर्नेछु। यसका लागि धेरै-धेरै धन्यबाद तपाईँलाई।
यो कविताले ८ कि ९ मा पढ्दा नेपाली पढाउने मिस (तत्कालको सजिलोको लागि बोलीचालीको यो शब्द प्रयोग गरिएको हो। )ले सिकाउनुभएको एक टुक्रा याद आयो;
सर्वनाम, विशेषण, कृया, जात, थर
ईकारान्त, जडा, पेशा, पोथी दीर्घ गर!
अन्त्यमा मेरो टाँसोलाई पनि उल्लेख गरिदिनुभएकोमा हार्दिक धन्यबाद!
दीपक जडित February 25, 2009
हद आभारी !
Dilip Acharya February 26, 2009
म पनि यो वसन्तजी जस्तै माथिको कविता छापेर राख्ने बिचारमा पुगको छु नत्र त आफ्नो पनि भाषा त ...!।
सिकारु February 26, 2009
हो धाइवा जी अति अपरिहार्य कुराको जानकारी लिएर आउनुभएछ । दिलिप जी ले भनेझै मैले पनि यो कबितारुपि भाषा शुद्धताको भावलाई कपिगरेरै राखु जस्तो लागीरहेछ । साच्चै हामि आफै नै मुर्ख छौ भाषाको शुद्धताको कुरामा ।
यस्को बारेमा एकपटक बसन्त जी को टाँसोमा पनि केहि बहस भएको थियो । अबत लेख्दा पनि मिलाउन नै कोशिस गर्नु नै पर्छ सकेसम्म । धन्यबाद धाइवा जी ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) February 27, 2009
ब्लगमा लागी परेको त ...आईटी ,बिचार , को ज्ञान मात्र नभएर अब त ..यस्तो भाषा ज्ञान पनी पाइने भो ....एक दम राम्रो ....धन्यवाद !
Jotare Dhaiba March 01, 2009
सबैलाई हार्दिक आभार ।
भाषालाई काँचै निमोठ्ने काम अझ विश्वसनीय र विकसित भनाउँदा विद्युतीय सञ्चारमाध्यले गरेका छन् । फलस्वरूप सोझा जनमानसमा त्यसैलाई आँखा चिम्लिएर अनुकरण गर्ने खतराको वहाब चलिरहने देखिन्छ ।
तत्कालको निकास हामी एक छेउमा बसेर कलम घोट्नेहरूकै हातमा रहेको छ, सचेत र सावधानीपूरवक अभिव्यक्त हुने । त्यो बाटोमा जाँगर मिलिरहोस् ।
कृष्ण पौडेल January 15, 2011
नेपाली भाषाको शुद्धताका बारेमा जानकारी राख्नु भएकोमा धाइबाजीलाई धेरै धन्यवाद। ब्लग र अनलाइन पत्रकारिता साथै नेपाली भाषमा लेखिने विविध खाले लेखनीको विस्तारसंगै नेपाली भाषाको आधारभूत ज्ञानको विस्तार र प्रसारमा जान्नेहरूले प्रयास नगरी भएको छैन । वास्तवमा अहिले हामी भाषिक अराजकताको स्थितिमा नै छौँ । अधिकांशत: हेर्‍यो भने , नेपालीहरूमा साहित्यको भूत राम्ररी नै सवार छ तर उनीहरूले साहित्य भनेको सामान्य भाषिक ज्ञान र प्रयोगको धरातलबाट माथि उठेर गरिने भाषा र भावनाको सुन्दर र परिष्कृत संयोजनयुक्त प्रयोग हो भनेर हेक्का राकेको पाइँदैन ।
नेपाली भाषा र र व्याकरण अनि एकरूपताको कुरा गर्दा यो भाषिक अराजकता नेपाली भाषाका स्वनामधन्य विद्वानहरूबाट शुरू भएको हो । कुनै बेला नेपाली भाषा र व्याकरणको स्तरयुक्त मापन निर्धारण गर्न भनेर, भाषा र साहित्यको ठेकेदारी सम्हालेको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान ( अहिले 'राजकीय'हटेको संस्था )ले स्तरीकृत् व्याकरण लेख्ने जिम्मेवारी सम्हाल्यो र रोहिणी भट्टराईको प्रधान सम्पादकत्वमा त्यो जिम्मा दियो । तर जो विद्वानहरू त्यो समितिमा परेननन् तिनले त्यो लेखन र सम्पादन समितिको खूबी र क्षमतामाथि प्रश्न उठाए । फलत:त्यो वृहद् व्याकरणमा प्रस्ताव गरिएका व्याकरण र भाषिक नियम प्रयोगका मानकहरूमा अर्काथरिले बिरोध जनाए र आ-आफ्ना डम्फू पिटीरहे । यसका एक जना अराजक बिरोधीका रूपमा डाक्टर ताना शर्मा थिए भने , अरू सबै जसो स्वनामधन्यहरूले पनि अरूको डाह गर्दै आफ्ना तानाबाना बुनिरहे । फलत: नेपाली भाषमा शुद्धाशुद्धीको एउटा स्तरीय मानकको अबाव बनिरह्यो । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।
तर, अहिले आएर त यो स्थिति बडो अराजक र दु:खद बनिसकेको छ ।
हामी कलेज पढ्ने ताका नेपाली गुरूहरूले , साझा प्रकाशनको गरिमा , गोरखापत्र प्रकाशनको गोरखापत्र , मधुपर्क आदि पत्रिकालाई शुद्ध नेपाली भाषा प्रयोगको आधिकारिक उदाहरण मानेर त्यो अनुकरण प्रयोग गर्नमा जोड दिन्थे । तर , पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनको असर कस्तो बनेछ भने यी पत्रिका र प्रकाशनमा त राजनीतिक नियुक्तिको बाटोबाट आएकाहरूको हालीमुहाली हुन गएर होला यिनका प्रकाशनहरू अशुद्धीका उदाहरण पो बनेछन् । पछिल्लो पटक , यी प्रकाशन पढ्दा मैले त्यही अनुभव गरेँ ।
साँचो भन्ने हो भने मैले नेपाली भाषा प्रयोग गर्नेहरू मध्ये १०% भन्दा कमले मात्र नेपाली वर्णमालाका अक्षरहरूको सही पहिचान गरेका होलान् कि भन्ने ठानेको छु । जब वर्णमाला ज्ञानको स्थिति यस्तो होला अनि अलिक माथिल्लो स्तरको वर्णविन्यास र शुद्धाशुद्धीको हालत के होला कल्पना गर्न सकिन्छ । नेपाली वर्णमाला ज्ञानको एउटा आलेख मैले दौँतरीमा राख्ने छु छिट्टै । तपाईँको प्रयासका लागि धन्यवाद ।
जोड दिन खोजेको शुद्धाशुद्धी कुनै संस्कृतका आचार्य गुरूको पाण्डित्याइँ नभएर सामान्य रूपमा ध्यान दिनु पर्ने स्वीकारयोग्य भाषिक प्रयोगको विषय हो । अन्यथा नलागोस् ।
CP Aryal November 05, 2013
धाइबा ! गजब काम !
धाइबा ! गजब काम !!
bindu December 29, 2013
शुद्धाशुद्धी सिक्न चाहनेहरुका लागी जडिबुटी नै दिनु भएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद ।
Arghelo Thapa February 12, 2014
अहिले भाषाको क्षेत्रमा सङ्कटकाल लागेको छ । भाषामा एकरुपता छैन । कुन प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सबैको फरक फरक दृष्टिकोण छ । जस्तो 'बीच' र 'बिच' कस्तो लेख्ने भन्ने बारे दुई थरी मत छ ।
बैय्याकरण त कामचलाऊ भयो, अब 'वाक्यगठन' कसरी गर्ने भन्ने पनि टाँस्ने हो कि?
Raju Poudel February 21, 2018
Dinesh Poudel (Itahari) March 14, 2018
एकदम कामलाग्दो जानकारी ।